DURUUF NOLALEED IYO DACDARO QAXOOTI(WARBIXIN) | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Diaspora DURUUF NOLALEED IYO DACDARO QAXOOTI(WARBIXIN)
DURUUF NOLALEED IYO DACDARO QAXOOTI(WARBIXIN)
Nolasha xeryaha dhadhab ayaa ah mid aad ulidata waxaana jira macluul balaaran taas oo saamaysay nolasha bulashada kaladuwan ee kudhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waxey ahayd bil iyo barka hor markii hayadihii halkan kahowlgalayay ay shaqooginkii jojiyen gud ahan tas waxey sababte in ay kum anan iyo kumanan ay wayaan edegyadii ay ubahnayen waxaanajira dad udhintey cuduro kaladuwan kuwaas oo wayadan badan fara ba,an ku haya dadka qaxootiga ah ee ladaa laa dhacahaya dar xumada iyo duruufta nolaleed ee kuhaysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Hadii aad u kuur gasho xalaada dhabta ah ee kajira guryaha iyo goobaha ay ku hoydaan dadka barakacayaasha ah waxaad kaqaadan darsi laxow iyo murugu kugu reebi kaas oo ah ubad farabad oo uu soo tuuray cudurka shuban biyoodka oo issagu naafeeyay nolasha ubakad soomaliyeed ee ku dhibataysan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaa ciir ciirahaya isbitaalada iyo goobaha lagud daaweeyo dadka taas oo ay indhahaagu qaban hayaan ubad farabad oo lagulatacaalahayo xaladooda caafimaad.
Diifta iyo dhafoor xumada kamuuqata dadka waayeelka ee ay lafa bixisay dacdaru waa tu aysan indhaahagu dhab ufiirin karin waa yeel laffa lafoobay iyo ubad uu diirku kudhagan yahay indhahooduna ay kasoo jeedaan meel god ah waa arin naxdin iyo murugo kugu roobe hadii aad tahay qof udan qan haya maatida soomaliyeed ee kusug xerayaha qaxootiga.
Dalan baab iyo daybalo wal bahaar ayaa kufuran mujtamac soomaliyeed ee kudhaqan xeryaha qaxootiga,waxay ka soo barakaceen wadankoodii hooyo meeshii ay usoo hayaameena wali kama aysan helin wax bar baxaal ah.
Dhab iyo dheel ukaf tan kamajirto guud ahaan xeryaha qaxootiga waxayna dhaga hooda maqlahayaan dharaar walba dhiila colaadeed ee wali kasii dhici dhulkoodii hooyo waxa uuna yahay lisaanu xaalkoodu allow wadankeenii noo daji.
Si aad oogadharagto xaaladaha dhabta ah ee kajira xeryaha qaxootiga ha ka agfogaanin shabkada danwaanews.com oo iyadu dirada saari doonta kasoo warbixinta xalada xeryaha qaxootiga dhadhaab.
lasoco qaybta labaad oo faah faahsan insha allaah, danwaanews.comama emailka shabakada DANWAA danwaanews@hotmail.com
Jaaliyadda Atlanta oo soo dhaweysay doorashada madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo Sidan Aad Ugu Fiirso Xulashadsa R. Wasaarahaada